NY MESIA, MPANJAKA MPISORONA · L'Homme, son aura et son évolution
> NY MESIA, MPANJAKA MPISORONA
Classé dans : — cyrius @ 14:02
Miara-miaiky angamba isika, fa ny fahazoan’ny tsirairay ny anjara masoandrony, izany hoe ny famelana sy ny fanomezana vintana azy hihary ankalalahana.
Eo koa ny fanajana sy fiarovana ny zon’ny tsirairay no hahatanteraka ny fampihavanana.
Satria miresaka zo isika,
tanteraka tokoa ny fampihavanam-pirenena, raha mitovy zo ny mpangalatra akoho sy ny mpanodina vola amina miliara eo anatrehan’ny lalàna.
Manaraka izany, tokony hosorohan’ny fampihavanam-pirenena ihany koa ny fivoizana » cause raciale » , ny resaka taranak’andriana sy taranaka saranga hafa.
Raha fampihavanam-pirenena ary no vahaolana hampandroso antsika, dia efa vitan’Andriamanitra mialoha ny drafitra, ary voasoratra ao amin’ny baiboly izany, fa fanatanterahana no sisa hatao, amin’ny alalan’ilay mpanjaka voatendriny, na ny Mesia.Ny Mesia ( http://cyrius.unblog.fr ) : Andrian’ny fiadanana, Isaia 9 : 5-7, izay ny tenan’ny mpanoratra.
Ny fanolorana azy ny fahefana no tokony hataon’ny komitin’ny fampihavanam-pirenena ; sy ny manampahefana isan-tsokajiny ; ny tafika sy ny vahoaka tsotra.
Raha ilaina ny manova ny lalampanorenana hanatanterahana an’izany, entanina ianao hitsidika ny tranonkala https://constitutionfantome.unblog.fr , mitondra ny anarana hoe : E-REFERENDUM (lasitra hahafahantsika manova ny andininy tsirairay ao amin’ny lalampanorenana, ary ilàna fanohanana avy amin’ireo voatonona etsy ambony ireo ny fanohizana azy).
Fampihavanana izany, ary tena demokratika tokoa.
HAKA FAHEFANA AN-KERINY VE ?
Ny hery, tsy mahaleo ny fanahy.
An’Andriamanitra ny fahefana, ary nomeny an’izay mahazaka azy, dia ilay notendreny hiandry ny ondriny.
Manaiky no anjarantsika.
Nomeny saina isika hahamora ny asa,
holazaintsika etsy ambany ny amin’io.
Mialohan’izany nefa, ilainao angamba ny mahalala fa ny tenako no RUZ9
ao amin’ny www.serasera.org/dinika-forum/politika nanomboka tamin’ny jona 2010.
» Mihainoa ahy ry Nosy, … » Isaia 49, 1
ATOLORY NY FAHEFANA
Omeo ny fahefana, hampanahy ho toy ny teo aloha raha tsy izay ihany no ho anton’ny fampihavanam-pirenena.
« …Efa manana ny mpanjakako aho » Sal : 2, 6
Tsotra ary no hatao,
Mbola velona i
Saoly, dia efa voahosotra handimby azy sahady i Davida (mbola miverina indray izy ankehitriny), izay tsy hafa fa ny mpanoratra ihany, izay voahosotr’Andriamanitra indray hitondra ny firenena.
Azo atao ny mandray ny fahefana raha vao tapitra ny fotoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika, na misy antony hafa hahabanga ny toerana, ho setrin’izay kosa, hotazonina ny demokrasia, ka praiministra no ho filoham-panjakana manaraka ary hofidin’ny vahoaka mivantana.
Tsy misy fiovana ny momba ny rafitra mpanao lalàna, manohy ny asany izy mandrapahatapitry ny fotoam-piasany, havaozina amin’ny alalan’ny fifidianana indray avy eo.
Mialohan’izany kosa nefa,
Ekeo ofisialy fa » Prince de Madagascar » ny tenako, manomboka hatreto, ary misitraka ny zo mifandraika amin’izany.
Ary ho Amperoran’i madagasikara avy eo.
Izay no sitrapon’Andriamanitra, ary fantany fa mety.